U sheeg xajigaaga qeybaha Jirkaaga ugu dareenka badan si aadn ugu noolataan nolal farxad iyo is faham ku dhisan. - Gaaloos.com ≡Navigasi Menu
→ U sheeg xajigaaga qeybaha Jirkaaga ugu dareenka badan si aadn ugu noolataan nolal farxad iyo is faham ku dhisan.
U sheeg xajigaaga qeybaha Jirkaaga ugu dareenka badan si aadn ugu noolataan nolal farxad iyo is faham ku dhisan.
Sideedaba hadii aynu nahay noole waxa aynu leenahay baahi badan oo u baahan in wax laga qabto. Baahida aan qabno ayaa sida jaranjarada ukla saraysa. Midiba mida ay ka adagtahay ayay ka horeysaa.
Gabagabadiina waxa aan idin leenahay sidaa iyo qoys lagu reeyo noqda
HALKAAN KA DAAWO MUQAAALKAAN
8 Qalad Oo Ay Raggu Sameeyaan Xiliga Kulanka Sariirta Oo Dumarka Raaxada Kukala Gooya